बाराको कोल्हबीमा पनि असिना पानीको ताण्डव, रेडियोको टावर नै ढले - Cherwant Khabar
कोल्हबी : बारा जिल्लाको कोलहबी नगरपालिका लगायत बिभिन्न स्थानमा शुक्रबार मध्याह्न असिना झरेसँगै वर्षा भएको छ । तीव्र गतिको हावाहुरीसँगै शुरु भएको असिना पानीले व्यापक ताण्डव मच्चाएको थियो। कोरोना महामारीसँगै महिनौ देखि लकडाउनबाट पीडि़त जनताहरूलाई लगातारको हावाहुरी र असिना पानीले हैरान पारेको छ ।
बाराजिल्लाको कलैया र जितपुर सिमरा, निजगढ नगरपालिकाका आसपासका क्षेत्रमामा हावाहुरी सहित परेको असिना पानीले मकै, तरकारी तथा अन्य बालिहरुमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ ।
असिना, हावाहुरी र वर्षाका कारण दर्जनौं घरका छाना उडाएको छ भने कतिको घर, गोठ, पसल समेत भत्काएको छ भने आँप र लिचि बालीमा समेत ठूलो क्षति पूर्याएको छ ।
बिहिबार ११ गतेका दिन पनि हावा हुरीले कोल्हबीमा तनुजा आर्टस एण्ड क्रियसन प्रा. लि. द्वारा संचालन गरिएको रेडियो पातालगंगाको टावर समेत ढलिएकोले ठुलो क्षति भएको त्यस संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पनुहरले जानकारी दिनु भयो ।
महोतरीमा करेन्ट लागेर एक युवकको ज्यान गयो